Darodar okporo ụzọ na gị n'Ịntanet? - Ndị ọkachamara Semalt maara ihe ha ga-eme
Julia Vashneva, Semalt Onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị na-azụ ahịa, na-akọrọ ya otú o si merie spam nke Russia.
Ndị spammers na-arụsi ọrụ ike ọzọ, anyị ga-ewepụkwa ihe iji kpochapụ ha. Mgbe mpempe akwụkwọ Spam na-akụ na ebe nrụọrụ weebụ m, ekpebiri m igwu ihe ọzọ, o juru m anya ịhụ na onye ọhụụ ọhụrụ na-agbalị imebi data Google Analytics m. Nke mbụ, ana m enyocha okporo ụzọ ozi iji mara ihe mere weebụsaịtị m ji enweta ọtụtụ okporo ụzọ site na Russia. Achọtara m onye ahụ mebiri ihe n'oge ọ bụla ma kpebie ime ihe. Onye Spammer nke Russia si na saịtị ndị a: forum - buy backlinks cheap.topic darodar.com.
Mgbe m meghere njikọ a ma soro usoro ole na ole, achọpụtara m na ọtụtụ spammers nọ na-ekwurịta ụzọ ha ga-esi bibie weebụsaịtị. Njikọ a jigoro m gaa na saịtị ịzụ ahịa dị ka eBay.com, Amazon.com, na Alibaba.com. Amaghị m ihe ndị spam na-agbalị ime, ma n'ikpeazụ, achọpụtara m na ha na-anwa ịghọgbu m ka m nwee ike ịzụta ihe site na njikọ ha. Mgbe ahụ, enyochare m akụkọ akụkọ m ma chọpụta na otu n'ime ibe ndị ahụ anaghị akwado m na ebe nrụọrụ weebụ m. Ọ tụrụ m n'anya ịmata na njikọ otu ibe ahụ dị na saịtị nke ndị ahịa m niile. Biko rịba ama na ị ga-ahụ nke a na Nkọwa Akụkọ Mbụ dị ka ndị na-agba ọsọ na spammers jiri URL "/" mee ka profaịlụ na mgbasa ozi gị na ebe nrụọrụ weebụ gụọ.
Ndị spammers na-anwa ịziga otu data ahụ na akaụntụ Google Analytics. Ugbu a, ọ dịịrị gị mfe ịchọta njikọ ahụ ma gbochie ya na nchịkọta Google Analytics. achọrọ koodu nchịkọta data na nọmba UA nke akaụntụ gị, nke dị na ịntanetị n'efu. Kama nke ahụ, a ga-edekọ ya na akaụntụ Google Analytics gị. Ngwaọrụ dị mfe nwere ike ịpụta nọmba akaụntụ nchịkọta maka akaụntụ Google Analytics niile. naanị nsogbu nke nchịkọta Google dị ka ụfọdụ ndị kwuru na ọ bụ okporo ụzọ ziri ezi. Ana m arụ ọrụ nchịkọta Webtrends na ole na ole nke saịtị m na akaụntụ Google Analytics. Webtrends anaghị ekwu ihe ọ bụla banyere spam na-ezigara na ọnweghị ihe ọghọm, ya mere nkwubi okwu m na ọ bụ ọgụ na Google Analytics. Echere m na ha na-eme nke a iji ghọgbuo ndị ọrụ Google Analytics na-emeghị ihe ọjọọ ka ọtụtụ mmadụ nwee ike ịzụ ahịa site na njikọ njikọ ha.
Olee otú ịkwụsị ha?
N'ụzọ dị mwute, ọ gaghị ekwe omume ịkwụsị ha kpamkpam. Dika esighi akwado data gi na ihe nkesa gi, enweghi uzo iji kpochapu ndi a. Mana ị nwere ike iwepu data site na nchịkọta Google, jide n'aka na ọnụ ọgụgụ gị kwadoro arụmọrụ n'ezie.
Ụzọ kachasị mfe iji gbochie spammers na okporo ụzọ site na mmemme ha na-eziga bụ site na ịmepụta nzacha na akaụntụ Google Analytics gị. Gaa na ngalaba nke ha ma pịa na nhọrọ nzacha. I kwesiri ijide n'aka na i jiriwo "enyo", ebe ị ga-agbakwunye ihe nzacha ọhụrụ. Mepụta ụfọdụ nzacha ma wepu okporo ụzọ ntinye aka na aha njirimara (co.lumb.co). Echefukwala iji nyochaa nyocha tupu ịchekwaa gbanwere.
Enwere m olileanya na ntụziaka ndị a ga-abara gị na ebe nrụọrụ weebụ gị uru. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke spam emetụtala gị, ị ga - ejikọta ya na onye ọkachamara IT ma dozie nsogbu gị ngwa ngwa o kwere mee.